ဇူလိုငျ 3, 2018 – Healthy Life Journal
အမျှင်ဓာတ်များသော အစာစားခြင်းဖြင့် အသက်ရှည်ပြီး ရောဂါဝေဒနာများ ကင်းစေနိုင်
အမျှင်ဓာတ်များစွာပါသော အစာများ စားသူတို့သည် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သေဆုံးနိုင်ခြေ လျော့နည်းမှုရှိကြောင်း လူတစ်သန်းနီးပါးကို လေ့လာမှုအသစ်အရ တွေ့ရှိရသည်။ အမျှင်ဓာတ်ပါသော အစားများကို စားခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ ဆီးချို သွေးချိုရောဂါနှင့် ကင်ဆာရောဂါ အမျိုးမျိုး အပါအ၀င် နာတာရှည်ရောဂါများ ဖြစ်နှုန်းကို လျော့ကျစေနိုင်ကြောင်း...
ဇွဲကောင်းသည့် ဆရာမကြောင့် ၁၅ လကြာ သတိမေ့နေသော တပည့် ပြန်လည်နိုးထလာ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းမှ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် ကျန်ဟောင်ဂျီးဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ ၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီလက ဦးနှောက်သွေးမတိတ်တဲ့ရောဂါနဲ့ သတိမေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျန်ရဲ့ ဆရာမ အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် ထုန်ရှူဖန်းဟာ ဆေးကုစရိတ် တရုတ်ယွမ်...
ဖြစ်နေတဲ့ လေပြွန်ရောင်ရောဂါက နာတာရှည်လား
မေး။ ။ အထက်ပိုင်းလေပြွန်ရောင်ရောဂါ ၇လလောက် ရှိပါပြီ။ မကောင်းသေးပါ။ နာတာရှည်ရောဂါပါလား ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါ။ အောင်ဖြိုး (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ Chronic bronchitis ကို ဆိုလိုတယ်ထင်ပါတယ်။ သုံးလအထက် တာရှည်ချောင်းဆိုး၊ သလိပ်ထွက်...
ညာဘက်ပါးမှာ ပါးချိုင့်နဲ့ ကောင်မလေး
ပါမောက္ခဒေါက်တာဥာဏ်ဝင်းကျော်(ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ကေသီဟာ မိုးရဲ့ ပါးချိုင့်လေးကို ငေးကြည့်နေတယ်။ မိုးကိုတွေ့တဲ့သူတိုင်းက “ပါးချိုင့်လေးနဲ့ ချစ်စရာလေး . . ချစ်စရာလေး”လို့ပြောကြတယ်။ ဟုတ်တယ် . . ပါးချိုင့်လေးပါတော့ မိုးက ပိုလှသွားတယ်။ ဒီတော့ ရွက်ကြမ်းရေကျိုရုပ်ရည်လောက်ပဲရှိတဲ့ ကေသီဟာ မိုးလို...
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မတူညီတဲ့ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောင့် အာသီးရောင်တတ်ပါတယ်။ စတပ်ပတို ကော့ကပ်စ်ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် အဖြစ်များပါတယ်။ အာသီးရောင်တဲ့အခါဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာ တွေကတော့- လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အာသီးနီမြန်းနေခြင်း၊ အစာမျိုရခက်ခဲခြင်း၊ အစာမျိုတိုင်း နာကျင်ခြင်း၊ အသံနာခြင်း၊ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊...
အချိန်ကုန်သက်သာစေမည့် ရိုးစင်းသော နည်းများ
အချိန်ကုန်သက်သာစေမယ့် အလွယ်နည်းတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ – ဖုန်းအား အမြန်ပြည့်လိုလျှင် ဖုန်းအား မြန်မြန်ပြည့်ချင်ရင်ဖုန်း Flight mode ပြောင်းပြီးသွင်းရင် ပိုမြန်ပါတယ်။ – သင့်တော်တဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းမိတ်ကပ်ရွေးလိုလျှင် ဖောင်ဒေးရှင်း မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ အခါ မျက်နှာဒါမှမ ဟုတ်လက်ကောက် ၀တ်ထက်လည်ပင်းမှာ အရောင်စမ်းတာက...
အရေးကြောင်းနဲ့ ပါးရေတွန့်ရာတွေကိုဘယ်လို ဖုံးအုပ်မလဲ . . .
၊ လရိပ်မေ ၊ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ အလေ့အထက အသက်အရွယ်အလိုက် ပြောင်းလဲလာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြောင်း ထင်တာ၊ ကျီးကန်းခြေထောက်ဖြစ်တာနဲ့ တခြားအိုမင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေပေါ်တာတွေက မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး ဖုံးအုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေကို အရင်ဆုံး ပြင်ဆင်ပါ မိတ်ကပ်မလိမ်းခင် အသားအရေလှပအောင် အရင်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်။ အသားအရေကိုသန့် စင်ပြီးတိုနာလိမ်းပါ။...
လျှပ်ပေါ်လော်လီသည့် ယူနီဖောင်းကြောင့် ထိုင်းသူနာပြု အလုပ်ပြုတ်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ပရီချက်ပန်ချက်ရှရီဟာ ထိုင်းအရှေ့မြောက်ပိုင်း အီစန်ဒေသမှ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့လျှပ်ပေါ်လော်လီတဲ့ ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဟာ လူမှုမီဒီယာတွေမှာ နာမည်ကြီးသွားခဲ့ကာ ဝေဖန်မှုများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ကျပ်ခရမ်းဖျော့ရောင် ပေါင်ပေါ်စကပ်တိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ချက်ရှရီရဲ့ဓာတ်ပုံဟာ ထိုင်းသူနာပြုချစ်သူများအဖွဲ့အမည်ရ...
ဝှေးစေ့တစ်လုံးထဲပါရင် ကလေးရနိုင်သလား . . .
မေး။ ။ အမျိုးသားမှာ ဝှေးစေ့တစ်လုံးထဲ ပါရင် ကလေးရနိုင်ပါ့မလား။ Ye Yint Aung (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ မေး။ ။ ဝှေးစေ့တစ်လုံးတည်းပေမယ့် ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဆိုရင် ကလေးရနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက တစ် လုံးက မွေးကတည်းက...
ဇူလိုငျ လ၊ 2018 ခုနှဈ